के तपाईं माछा खाँदै हुनुहुन्छ? सावधान! स्याल्मन माछामा ७ दिनसम्म रहन्छ काेराेना « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
के तपाईं माछा खाँदै हुनुहुन्छ? सावधान! स्याल्मन माछामा ७ दिनसम्म रहन्छ काेराेना
चिसो वा फ्रिज गरिएको खाद्यान्नको प्याकमा कति लामो समयसम्म कोभिड–१९ भाइरस बाँच्नसक्छ भन्नेबारे पनि भर्खरै जानकारी आउँदैछ । तर यस्तो भाइरस संक्रामक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय पुष्टि हुनै बाँकी छ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ अनुुुसन्धानअनुसार सार्स–कोभ–२ चिसो स्याल्मन माछामा एक सातासम्म बाँच्नसक्छ र सायद, संक्रामक पनि हुनसक्छ । यसबारे धेरै प्रश्नको जवाफ भने अनुत्तरित छ । जस्तो – के माछा पकाउँदा भाइरस मर्छ स्याल्मन माछामा मात्रै भाइरस यति लामो समय रहन्छ वा अन्य माछा पनि रहन्छ यी प्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म फ्रोजन फुडको सुरक्षा पाटो अस्पष्ट नै रहने जनस्वास्थ सम्बन्धी पोर्टल हेल्थ सट्स डटकमले जनाएको छ ।
साउथ चाइना एग्रिकल्चर विश्वविद्यालय र गोन्जओस्थित गुवान्गडोङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साईन्सेसको अनुसन्धानले यस तथ्यलाई उजागर गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा लिइएको स्याल्मोन माछाको नमूनाअनुसार ८ दिनसम्म ४ डिग्री सेल्सीयस तापक्रममा कोरोना भाइरस बाँचेको देखिएको थियो । झन्डै यही तापक्राममा राखेर माछाहरुको ओसारपसार गरिन्छ । गत जुनयता चिनियाँ अधिकारीहरुले आयातित मासुु, प्याकेजिङ र कन्टेनरहरुलाई कोभिड–१९ को संभावित स्रोत मानेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । प्याकेजिङ गरिएका खाद्यान्नमा बारम्बार किटाणुुको संकेत भेटिएपछि उनीहरुले यस्तो अनुसन्धान थालेका हुन् ।
चिनियाँ अधिकारीहरुका अनुसार ५ लाखभन्दा बढी नमूनाको परीक्षण गर्दा ६ वटा पोजेटिभ भेटिएका छन् । माछालाई डेलिभरीको समय शुन्यदेखि ४ डिग्री सेल्सियसमै राख्नुुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही नरहेको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २५, २०७७ बिहीबार २ : १४ बजे